AMISOM oo ka guuraya mid ka mid ah fariisimahoodii ugu weynaa ee Muqdisho.
Ciidamada AMISOM ayaa dhowaan la filayaa inay isaga guuraan Saldhigga ay ku leeyihiin Garoonka Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho, kaasoo ka mid ahaa xarumaha ugu waa weyn ee ay ka degan yihiin Muqdisho.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo qorshaha Ciidamada Soomaaliyeed kala wareegayaan goobo muhiim ah oo ay AMISOM kaga sugan yihiin Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka mid ah.
Wasiirka ayaa sheegay in Garoonka Stadium Muqdisho ay Ciidamada dowladda kala wareegi doonaan AMISOM, taasoo qeyb ka noqon doonta qorshaha dhow ee Ciidamada Soomaaliya ay amniga dalka ugala wareegayaan.
Mr Islow ayaa sheegay in marka ciidamada amniga Soomaaliya la wareegaan Stadium Muqdisho lagu sameyn doono dayactir, isla markaana dib loogu wareejin doono Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga, si loo soo celiyo heybadii uu lahaa Isboortiga Soomaaliyeed, dhalinyaradana ay fursad ugu helaan in goob nabdoon ku ciyaaraan.
Waxaa uu sheegay in sanadkii hore Ciidamada Booliska ay la wareegeen xaruntii Jaamacadda Gaheyr oo ay ka guureen Ciidamada Burundi, isla markaana xaruntaas dib loogu wareejiyay Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
“Waxaa la gaaray xilligii Ciidanka Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigi lahaayeen guud ahaan amniga dalka, waxaan ka codsaneynaa shacabka Soomaaliyeed in ay taageeraan ciidamada ayna kala shaqeeyaan sidii looga guuleysan lahaa kooxaha Nabad diidka ah oo shacabka Soomaaliyeed u diiday Nabada” ayuu yiri Wasiir Islow.
Shirkii ka dhacay magaalada Brussels ayaa qorshihiisa ahaa sidii xilliga kala guurka ay Ciidamada Soomaaliya amniga dalka ugala wareegi lahaayeen Ciidamada AMISOM oo muddo 11 sano dalka ku sugan.(Jwhn)